Tale jeneralin'ny Rejistra momba ny tany sy Cadastre hanakarama olona mandray anjara | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYJobsTale jeneralin'ny Rejistra momba ny tany sy Cadastre amin'ny mpiasa mpiasa
03 / 01 / 2020 Jobs, ANKAPOBENY
talen'ny tale-jeneraly momba ny fanoratana an-tanety sy cadastre
Ny Tale jeneralin'ny Rejistra momba ny tany sy Cadastre dia nanambara fa olona 657 no alaina alalana araka ny Lalàna laharana 125 momba ireo mpiasam-panjakana miasa amina tobim-paritany. Ireo teboka mpilatsaka hofidina KPSS (B) dia apetraka amin'ny laharana ary hatao ao amin'ny fanadinana an-tsoratra dia hatao ny fividianana.
Ao anatin'ilay fanambarana nataon'ny Tale jeneralin'ny Rejistra momba ny tany sy Cadastre: Genel Ny Tale Jeneralin'ny Rejistra momba ny tany sy ny Cadastre dia hiasa ao amin'ny sampam-panompoam-paritany ary hiasa mifanaraka amin'ny Andininy faha-125 (B) ao amin'ny Andininy faha-657 amin'ny lalàna momba ny mpiasam-panjakana ka hatramin'ny 4 hatramin'ny toeran'ny 06 Mpikatroka Mpikambana momba ny vondron-tany sy ny faritany. Mikasika ny fahazoan-dàlana ahitam-bokatra momba ny fahazoan-dàlana an-tsokosoko nivoaka tao amin'ny Gazety ofisialy tamin'ny 06/1978/7 ary misy isa 15754 mifamatotra amin'ny fanapaha-kevitry ny filankevitry ny minisitra tamin'ny 28/6/1978 ary isa faha-16330/XNUMX ho rakotry ny tetibola renivohitra.
Araka ny andalan-tsoratra (c) ny andalana voalohany amin'ny Andininy faha-2 ny Annex-4 ny Fitsipika, ny tompon'andraikitra voatanisa dia raisina amin'ny alàlan'ny vokatry ny fanadinana an-tsoratra amin'ireo mpifaninana antsoina hoe hatramin'ny XNUMX (efatra) inefatra ao amin'ny isan'ny toerana tokony horaisina raha omena ny vondron'olona pps.
FANGALANA TANANA: 1-Ny sasany amin'ireo fepetra tsy maintsy tanterahan'ireo mpangataka: amak Raha tsy misy fitsarana an-tendrony ny fepetra voalazan'ny andininy faha-657 ao amin'ny lalàna lah.
2-Na efa nandalo aza ny fotoana voatondro ao amin'ny andininy faha-53 ao amin'ny fehezan-dalàna Tiorka; fandikan-dalàna manohitra ny fandriam-pahalemana amin'ny fanjakana, fandikan-dalàna manohitra ny baikon'ny lalàm-panorenana ary ny fiasa, fandikan-dalàna manohitra ny fiarovam-pirenena, fandikan-dalàna manoloana ny tsiambaratelo sy fitsikilovana, fanodikodinana, fanolanana, fanolanana, na dia voasazy herintaona na mihoatra aza izy ireo noho ny fanitsakitsahana natao na famotsoran-keloka. , halatra, fanodinkodinana, fanadinoana, fanararaotana ny fahatokisana, fisolokiam-bola amin'ny fihoaram-pefy, fanararaotana amin'ny malemilemy, fanatanterahana ny asa ratsiny, fanodinana ny soatoavin'ny fananana vokatry ny heloka bevava na tsy hohelohina amin'ny heloka bevava an-tsokosoko.
Ny mpifaninana 3-lahy dia tsy misy ifandraisany amin'ny raharaha miaramila.
KPSS dia tokony ho 60 farafaharatsiny:Amin'ny lafiny iray, ireo kandidà dia takiana amin'ny fitondrana fepetra manokana. Ny fepetra takiana dia toy izao manaraka izao: Fitantanana ny fampahalalana sy antontan-taratasy, tahirin-kevitra sy fampahalalana, tahirin-kevitra, fitahirizam-boky, na Ottoman Paleography, fampianarana arabo ary Persiana ao amin'ireo sampam-pampianarana ambony. (Ireo mpifaninana izay voatendry ho voatendry dia hangatahana hanao transcript mampiseho fa nahita ny lesona Ottoman Paleography, Arabo na Persiana.)
2016 vondrona KPSS (B) KPSS-P3 karazana isa 60 (enimpolo) na mihoatra
LALAOM-PANJAKANA SY FOTOANA FARANY: Registre de la régime sy Cadastre ao Ankara, Istanbul, Izmir, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakir, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Edirne, Van, Elazig, Eskisehir, Denizli, Kastamonu, Sivas, Sanliurfa ary Yoz 06 Formula fangatahana fangatahana mpiasa (13 / B) izay azo avy amin'ny tranokalan'ny Tale Jeneralintsika (www.tkgm.gov.tr) eo anelanelan'ny 2018-4 Aprily XNUMX ka hatramin'ny faran'ny ora fiasana sy ireo antontan-taratasy voatondro amin'ity taratasy ity dia alefa ao. dia hatao manokana.
Raha mihoatra ny iray ny Direction régionale no ampiharina, ny fangatahana rehetra dia azo raisina ho tsy manan-kery ary na dia tendrena aza ny kandida dia hofoanana ny fanendrena.
Ny tetikasa kabone Uzungöl Kabina dia vita ho an'ny Asa atao Cadastre
Tale jeneralin'ny Rejistra momba ny tany sy Cadastre